Iji dozie mkpa ngwaahịa nke ndị ahịa, ụlọ ọrụ anyị eguzobewo otu ìgwè pụrụ iche. Ya mere, anyị nwere ike mesie ndị ahịa obi ike:
Anyị na-enye ọrụ otu-na-otu ahaziri maka ndị na-azụ ahịa afọ ojuju.
Anyị ga-aza ajụjụ ndị ahịa n'ime obere oge, ka ndị ahịa nwee ike zuru ike.
Anyị abụọ bịanyere aka na nkwekọrịta nzuzo iji hụ na nchekwa nke ọrụ ahụ.
Teknụzụ chaja ikuku ikuku
Teknụzụ chaja ngwa ngwa PD
Nkà na ụzụ multi-coil
Teknụzụ mmepe nhazi ngwaahịa mejupụtara
30 Ngwọta nchaji ikuku ogologo MM maka arịa ụlọ
Otu esi eme ka obi sie ndị ahịa obi ike?
Ndị otu Lantaisi na-achụso ngwaahịa dị elu, enweghị ntụpọ, ngwaahịa nchekwa na gburugburu ebe obibi. Anyị na-enye nkwado na-agbanwe agbanwe, ngwaahịa ruru eru, ọnụ ahịa ezi uche dị na ya na ọrụ dị elu iji mejuo ndị ahịa anyị. Na-emesi ndị ahịa obi ike bụ nkà ihe ọmụma azụmahịa anyị, yabụ anyị nwere njikwa njirimara ngwaahịa siri ike. Iji mezuo ebumnuche nke njikwa mma, anyị nwere ngalaba njikwa mma zuru oke.
DQE ( Injinia ogo imewe)
DQE ana achi achi na imewe pụta izute mkpa nke ndị ahịa, ma na-achịkwa nke ọma analysis, nhazi, ikpe, mkpebi na mgbazi nke dum oru ọrụ usoro nke imewe. Ọmụmaatụ: Na mbido njikwa njikwa na atụmatụ nke ngwaahịa ọhụrụ, DQE ga-ahụrịrị maka imepụta ihe nlele, ọnọdụ nnwale, na mmepụta nnwale nke ngwaahịa ọhụrụ, ma ga-eme nnwale dị ukwuu nke nyocha iji chọpụta ma ngwaahịa ndị emepụtara ga-ezute. chọrọ ndị ahịa na Ma ọ na-eju afọ na ngwa, gwupụta ma dozie nsogbu niile dị na usoro mmepụta ihe.
SQE ( Injinia Ogo onye na-eweta ngwaahịa)
SQE na-achịkwa ogo akụrụngwa nke ndị na-ebubata ya na-enye, site na nyocha na-agafe agafe na njikwa na-arụsi ọrụ ike, njikwa mma na-aga n'ihu, na-etinye okwu ndị dị mma na mbụ, na-ebelata ụgwọ ọrụ dị mma, na-achọpụta njikwa dị irè, na ndị na-ebubata ngwaahịa na-ekere òkè na ọkọnọ Nyochaa ma nye echiche ndị ahọpụtara. .
PQE ( Injinia Ogo ngwaahịa )
Dị ka ihe achọrọ nke ọrụ ahụ si dị, PQE na-eduzi nyocha data maka nyocha na mmepe nke ngwaahịa ọhụrụ ma na-enye akụkọ PFMEA. Ọ bụkwa ya na-ahụ maka nlekọta na nyocha nke PQC (nhazi usoro nhazi), FQC (nchịkwa ngwaahịa emechara), OQC (nchịkwa na-apụ apụ) na usoro ndị ọzọ, na-egosi loopholes na ijikwa ha n'oge.
CQE ( Injinia ogo ndị ahịa)
CQE na-ahụ maka ịzụ ahịa ngwaahịa mgbe emechara. Anyị ga na-eguzo mgbe niile n'azụ ndị ahịa anyị, na-esochi ma na-akọ akụkọ mgbe niile, nyochaa ụkpụrụ nke ịdịmma ngwaahịa, chepụta ụkpụrụ ndị nwere ike ime na ụzọ ọnụọgụ, ma nye usoro mgbochi na mmezi.